मंसिर 26, 2074
सजना बराल,मंसिर २३, २०७४
आजभन्दा ठ्याक्कै २५ वर्षअघि नेपाल टेलिभिजनबाट एउटा डकु–ड्रामा प्रसारण भएको थियो । जम्मा दुई भागको उक्त शृंखला खुब चर्चित बन्यो । नेपालमा मात्र होइन, नेपाली टाइम्स पत्रिकाका अनुसार विभिन्न देशका २० वटा टीभीले त्यसलाई प्रसारण गरे । बाल–विवाह र मातृ मृत्युबारे बनाइएको ‘उजेली : अ चाइल्ड ब्राइड इन नेपाल’ लाई नेपाली आर्ट सिनेमाको क्षेत्रमा एउटा ‘क्लासिक’ मानिन्छ ।
दीपेन्द्र गौचन निर्देशित ‘उजेली’ राम्रो हुनुमा धेरै रहस्य छैनन् । यसको स्क्रिप्ट अनि मेकिङ बलियो हुनुका साथै सशक्त अभिनयले ‘सिम्ली द बेस्ट’ बनाइदिएको मात्र हो । गैरव्यवसायी कलाकार लिइएको फिल्ममा रसुवाका स्थानीयले अभिनय गरेका छन् । यसकी मुख्य पात्र उजेली बनेकी ब्रिन्दा अधिकारीलाई त विद्यालयको कक्षा कोठाबाटै टपक्क टिपेर सुटिङस्थल पुर्‍याइएको थियो । उनलाई एकफेर हेर्नासाथ दीपेन्द्रले ‘ओके’ गरेका थिए ।
त्यो बेला कक्षा तीनमा अध्ययनरत दस/एघार वर्षकी ब्रिन्दाले अन्नाधुन्न अभिनय गरिन् । उनलाई आफू कसका लागि के गर्दै छु भन्ने हेक्का थिएन । ‘फिल्म अरे’ भन्नेसम्म सुनेकी थिइन् । तसर्थ, निर्देशकले जसो भन्यो उसै गरिन् । जे बोल्न लगाए त्यही भनिदिइन् । अहिलेजस्तो रिहर्सल र वर्कसप गर्ने चलन कहाँ थियो र ? एकसरो देखे/सुनेको भरमा अभिनय र संवाद याद गर्नुपथ्र्यो । उनले गरिन्, मज्जैले ।
त्यो बेला ब्रिन्दालाई डर, लाज, संकोच केही महसुस भएन । त्यस्ता भावना जाग्ने उमेरै कहाँ थियो र ? बच्ची थिइन् । बरु, अहिले लजाउँछिन् । अन्य युवाझैं उनलाई १४/१५ वर्षको बेलादेखि लाज लाग्न थालेको हो । अहिले झन्डै दुई दशक नाघिसक्दा पनि उनी लजाए जसरी बोल्छिन् । ‘लाज त लागिहाल्छ नि,’ मुसुक्क हाँस्दै उनले भनिन्, ‘यो स्वभावले मलाई फाइदै गरेको छ ।’
लामो समयपछि नेपाल आएको मौकामा बिन्द्रा यसै साता कोसेलीसँग गफिइन् । उनी अचेल कतारमा बस्छिन्, श्रीमान्सँगै । त्यहाँको एक क्लिनिककी नर्स हुन् । अझै १०/१२ वर्ष उतै बिताउने योजना रहेछ । उनका श्रीमान् राजन सापकोटा व्यवसाय गर्छन् । उनीहरूको भेट ‘रङ नम्बर’ बाट भएको थियो । ‘उहाँले अर्कैलाई गरेको फोन मेरोमा आएछ,’ उनी भन्छिन्, ‘स्वर मन परेर बोलेको बोल्यै भयौं । चार वर्षअघि बिहे गरेका हौं ।’
राजनले ब्रिन्दाको कलाकारिताबारे धेरै पछि चाल पाए । अनि खुसी भए । त्यो बेलादेखि नै मौका मिल्नासाथ मान्छेहरूलाई ‘उजेली’ बारे गफ दिने गरेका छन् । उजेली स्वयंचाहिँ लजाएर टमाटरजस्तै रातो भइहाल्छिन् । उनको लाजको त के कुरा भयो र † ‘मलाईभन्दा बढी उहाँलाई इन्टरेस्ट छ उजेलीमा’, ब्रिन्दा भन्छिन्, ‘‘म बरु वास्ता गर्न छोडिसकेँ । फिल्म/टीभी खासै हेर्दिनँ । उहाँ सबलाई ‘उजेली ऊ नै हो भनेर’ सुनाइहिँड्नुहुन्छ ।’’
बच्चा बेलामा जे गरिन्, गरिन् । बुझ्ने भएपछि ब्रिन्दालाई फिल्ममा खासै रुचि भएन । चञ्चले उमेरमा समेत हिरोइन वा मोडल बन्ने इच्छा जागेन ।
आफ्नो पुरानो एक्टिङ हेरेर हाँसिन् बरु । जीर्ण भर्सनकै सही, अहिले युट्युबमा उपलब्ध ‘उजेली’ नै पनि उनले पूरा हेरेकी छैनन् । ‘हेर्नै मन लाग्दैन,’ उनी मुख बिगार्दै बोल्छिन्, ‘कहिलेकाहीँ खोल्छु, अलिकति हेरेर छोड्दिन्छु ।’
फिल्म क्षेत्रबाट निकै टाढिइसकेकी छन् । हुन त उनी कहिले पो नजिक थिइन् र † फिल्म युनिटले प्रतिभा चिनेर उनीबाट काम लिए, पारिश्रमिक दिए अनि जहाँको त्यहीँ छोडेर हिँडे । त्यो स्वाभाविकै थियो सायद । संयोगले पर्दामा आएकी उनी स्वयं पनि यसलाई ‘लक’ मान्छिन् । ‘हाम्रै गाउँ पुगेर मलाई नै लिनु मेरो लक होइन त ?’ उनी बोल्छिन्, ‘मलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउन त्यसले बाटो खोलिदिएको रहेछ ।’
जे होस्, एउटै फिल्मबाट जीवनभरलाई पुग्ने नाम कमाइन् बिन्द्राले । त्यो चानचुने कुरा थिएन र छैन पनि । उनको बेजोड प्रस्तुतिले २०५० को दशकका दर्शक मोहित बने । अझै पनि उजेली भन्नासाथ त्यो बेलाका मान्छे चनाखो भइहाल्छन् । उनको एउटै काम काफी भइदियो । दोस्रोपटक कहिल्यै पर्दामा नआएकी उनीबारे पत्रपत्रिकामा निकै पछिसम्म खबरहरू छापिए । बितेका आठ/दस वर्षयताचाहिँ फलोअप कम भयो । उनी मिडिया खोज्दै आइनन् ।
इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको जमाना छ अहिले । प्रतिभा भएका, राम्रो वा अलि फरक काम गर्नेलाई युट्युब र फेसबुकले रातारात सेलेब्रिटी बनाइदिन्छ । उजेलीकै कुरा गरौं । युट्युबमा सर्च गर्दा अचेल दुइटी उजेली भेटिन्छन् । सिन्धुपाल्चोकको विकट गाउँ सेलाङकी उजेली तामाङ र ‘उजेली’ फिल्मकी उजेली अर्थात् उनै ब्रिन्दा । तामाङ अलि धेरै भेटिन्छिन् भने ब्रिन्दाको त उही एउटै पुरानो भिडियो मात्र छ ।
गाउँको विकासका लागि केही गर्न चाहेकी तामाङलाई सबैले स्याबासी र शुभकामना दिँदै उनीसम्बन्धीका भिडियोमा कमेन्ट गर्ने गरेका छन् । ब्रिन्दाले पनि हेरेकी छन्, ती भिडियोहरू । प्रभावित छिन्, अहिलेकी उजेलीको सोच देखेर । ‘म पनि पढ्न चाहन्थेँ’, उनले आफ्नो पात्रबारे बोलिन्, ‘तेज थिएँ । बालखैमा बिहे गरिदिनाले जिन्दगी बर्बाद भयो ।’ संयोग कस्तो भने उजेली तामाङको पनि विवाहको कुरा चलेको थियो । धन्न उनले पढ्न पाइन् । ब्रिन्दालाई लाग्छ, पर्दामा नआएका उजेलीहरू कति होलान् ? तिनको अवस्था कस्तो होला ?
उजेली तामाङलाई सहयोगी मनहरूले काठमाडौं ल्याएर पढाइदिएका छन् । ब्रिन्दा कहिलेकाहीँ आफ्नै कथा दोहोरिएको ठान्छिन् । उनी पनि रसुवाको विकट भेग कटुन्जेबाट उसैगरी काठमाडौं आएकी थिइन्, अरूको सरसहयोगमा । भक्तपुरस्थित एसओएस बालग्रामले उनलाई ग्रहण गर्‍यो, पढाएर अब्बल बनाइदियो । उजेली तामाङले पनि आफ्नो खुट्टामा उभिने सपना देखेकी छन् । दुईबीचको समानता यत्ति नै हो ।
बाल बेहुली, उजेलीको भूमिका निर्वाह गरेकी ब्रिन्दा आफैं भने विवाहको करकापमा कहिल्यै परिनन् । उनलाई निर्धक्क पढ्ने/लेख्ने वातावरण थियो । तर, उमेर बढ्दै गएपछि उनी धक फुकाएर विद्यालय जान सकिनन् । ‘सबैले जिस्काउँथे,’ उनी सम्झन्छिन्, ‘फिल्ममा जुन पात्रसँग बिहे भएको थियो, ऊ पछि हाम्रै स्कुलमा पढ्न आयो । सबैले हामी दुईलाई नाम जोडेर जिस्काउन थाले । साँच्चैको बिहे भन्ठानेछन् कतिले त । मलाई साह्रै असहज महसुस हुन्थ्यो । दिक्क लाग्थ्यो । स्कुल
जानै छोडेँ ।’
उनको अवस्थाबारे पत्रपत्रिकामा समाचार आयो । कान्तिपुर दैनिकमा फोटो फिचर (हेर्नुहोस् तस्बिर) छापिएपछि समाजसेवीहरूले उनलाई काठमाडौं ल्याए । बस्ने/पढ्ने वातावरण मिलाइदिए । ‘ममाथि पत्रिकाले गुन लगाइदिएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यहाँसम्म पुग्ने क्षमता थिएन हाम्रो । आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । समाचार नछापिएको भए पढाइ त्यहीँ टुंगिन्थ्यो । गाउँको गाउँमै रहन्थेँ । उजेलीको लकले नै मलाई अगाडि बढाइरह्यो ।’
कुरा त्यहीं टुंगिएन, ब्रिन्दाको कथा केस स्टडी बन्यो । यसले फिल्म मेकरमाथि नै प्रश्न उठायो । निर्देशक दीपेन्द्रलाई मान्छेले सोधे, ‘तपाईंकै फिल्मका कारण उनले मानसिक तनाव झेल्नुपर्‍यो । फिल्म बनाइसकेपछि पनि निर्देशक आफ्ना कलाकारप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ वा पर्दैन ?’ यो प्रश्न आफैंमा बहसको विषय बन्यो, अझै बनिरहेकै छ ।
‘त्यो नै सही समय’
धेरै वर्ष बितिसक्यो । उजेली ओझेल पर्नु सामान्य लाग्छ । उनलाई अहिले कसले चिन्ने ? एचडीको जमानामा युट्युबमा अपलोड गरिएको उनको धमिलो भिडियो कसले हेरोस् ? सायद उजेली गलत समय वा भनौं अलि चाँडै पर्दामा आइन् । सोच्नुस् त, त्यो समय अहिले भइदिएको भए के हुन्थ्यो होला ? ब्रिन्दा कति ‘भाइरल’ हुन्थिन् होला † कत्रो सेलेब्रिटी बन्थिन् होला † उनका फलोअर्स कति हुन्थे होलान् ?
हुन त त्यो बेला पनि हिट भइन् तर अहिले भइदिएको भए कुरा बेग्लै हुन्थ्यो कि ? ब्रिन्दालाई यस्तो पटक्कै लाग्दैन । उनी त्यो चीजका लागि त्यही समय उत्तम ठान्छिन् । ‘बाल विवाहविरुद्ध उजेलीले ठूलो तरंग ल्याइदियो,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यो समयमा त्यस्ता फिल्म आवश्यक थिए । अहिलेको परिवर्तन आउन पहिलेका तिनै चीजले थोरबहुत मद्दत गरेका हुन् ।’ फिल्ममै उल्लिखित तथ्यांकअनुसार त्यो बेला नेपालका ४० प्रतिशत महिलाको १४ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह हुन्थ्यो । अहिले १० प्रतिशतको विवाह १५ वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने गरेको छ । चेतना स्तर अझै बढ्नुपर्ने आवश्यकता छँदै छ ।
युनिसेफले आफ्नो लगानीमा बनाएको उक्त फिल्म जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले देशैभरि पुर्‍यायो । अझै पनि कतिपय गैरसरकारी संस्थाले ‘उजेली’ देखाएर बाल विवाहविरुद्ध जानकारी बाँड्ने गरेका छन् । यो विषयमा बग्रेल्ती फिल्म बने पनि उजेली जत्तिको सरल, सुन्दर र सफल फिल्म निर्माण हुन सकेको छैन । एनजीओ/आईएनजीओका लागि बनाइएका पछिल्ला फिल्म कलात्मक लाग्दैनन् । तिनमा नारा र सन्देश त हुन्छ, सिर्जनशीलता भेटिँदैन ।
फिल्म क्षेत्रबाट पर रहे पनि ब्रिन्दाभित्रको कलाकारिता अझै टाठो छ । उनी कसले कसरी अभिनय गरेको छ, को कति पात्रमा डुबेको छ भन्ने झट्टै थाहा पाउँछिन् । ‘दयाहाङ राई राम्रा कलाकार हुन्’, अहिलेका सिनेमाबारे सोध्दा उनले फ्याट्टै भनिन्, ‘उहाँको सबैथोक राम्रो छ । अभिनय गर्दा अभिनय गरेको जस्तो देखिँदैन । नाटक हो तर नाटकजस्तो लाग्दैन । कलाकारमा हुनुपर्ने चीज यही नै त हो ।’
आजकल एक्टिङको कोर्स लिइवरी काम थाल्ने जमाना भएकाले धेरैले राम्रो गर्ने गरेको उनले बताइन् । यस्तो सुबिस्ता भएका बेला पनि जे पायो त्यही गर्नुचाहिँ लाजमर्दो हुने उनको भनाइ छ । ब्रिन्दा काममा गुणस्तर खोज्छिन् । उनी फिल्मलाई मुख्य पेसा बनाउनु हुन्न भन्नेमा विश्वास राख्छिन् । यसो गर्दा गुणस्तरीय काम दिन नसकिने उनको बुझाइ छ ।
‘छानेर फिल्म खेल्दा जीविका धान्नै गाह्रो हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘जथाभाबी गर्दा गुणस्तर खस्किन्छ । अरू केही पेसामा आबद्ध भइयो भने कलाकारितालाई विशुद्ध कलारिताकै रूपमा लिन सकिन्थ्यो कि ?’ सायद ।
साइलेन्स ब्रेकर !
कान्तिपुर संवाददाता ,मंसिर २३, २०७४
सबै वर्ण, वर्ग, पेसा र भर्चुअल रूपमा संसारभरका ती महिला र पुरुषहरू जसले लामो समयको मौनता तोडे । उनीहरू क्यानिफोर्नियाका श्रमिक, न्युयोर्कको कुनै होटल वा युरोपियन संसद्का कर्मचारी हुन सक्छन् । उनीहरू औपचारिक रूपमा कुनै नाम नभएको आन्दालनका सदस्य हुन् । तर अहिले उनीहरूसँग एउटै आवाज छ— यस्तै पंक्तिसहित विश्वप्रसिद्ध ‘टाइम म्यागेजिन’ ले यो वर्षको लागि पर्सन अफ दी इयर सार्वजनिक गरेको छ । पूरा पढ्नुहोस्
शशी कपुरको ‘ट्याक्सी दौड’
यज्ञश,मंसिर २३, २०७४
एक समय शशी कपुरका बारे एउटा हल्ला थियो— शशीले एकसाथ सयवटा फिल्म साइन गरेका छन् । उनी यति व्यस्त थिए कि दिनमा तीनवटा फिल्मको सुटिङ भ्याउँथे । एकै वर्ष उनका १२ वटा फिल्म रिलिज भएका छन् । यसरी व्यस्त भएका आफ्ना भाइलाई राज कपुरले एउटा उपनाम दिएका थिए— ट्याक्सी । यस्तो ट्याक्सी जो पैसा कमाउनका लागि दिनरात नभनी दगुरेको दगुर्‍यै गर्छ । पूरा पढ्नुहोस्
राष्ट्रिय जर्सीदेखि लाहुरे बर्दीसम्म
सुबास हुमागाईं,मंसिर २३, २०७४
फुटबलमा नेपालविरुद्ध भारतको खेल उमेर समूह होस् या सिनियर, दुई टोलीबीचको स्तर जति फरक भए पनि खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुने गर्छ । त्यसमाथि उपाधिको छिनोफानो हुनुपर्छ, खेलको माहोल छुट्टै हुन्छ । २०७० सालको असार, नेपाल र भारतको यू–१६ राष्ट्रिय टोली साफ यू–१६ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा दशरथ रंगशालामा उत्रिए । पूरा पढ्नुहोस्
जसलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न
हिमेश,मंसिर २३, २०७४
पुरानै सही, विराट कोहली र आशिष नेहराको एउटा तस्बिर पछिल्लोपल्ट धेरैले दोहोर्‍याएर हेरे । त्यसमा नेहरा भर्खरको ठिटो कोहलीलाई पुरस्कार दिइरहेका थिए । केही समयअगाडि मात्र नेहराले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्न्यास लिए, न्युजिल्यान्डविरुद्धको दिल्लीमा भएको ट्वान्टी–ट्वान्टी खेलपछि ।पूरा पढ्नुहोस्
समकालीन नेपाली कविताबारे अहिले बढी नै विमर्श हुने गरेको पाइन्छ । कतिपयले कविताको यात्रा क्रमश: ओरालो लाग्दै गएको विचार प्रकट गरिरहेका छन् भने कतिपयले बरू स्वयम् कवि ओरालो लागिरहेको होला तर कविता दिनानु दिन समृद्धिको उकालोतर्फ यात्रारत छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
माधवीसिंह शाह,मंसिर २३, २०७४
केही वर्षअघिको कुरो हो । हामी नेपालगन्जको नयाँ सडकमा डुल्दै थियौं । साँझको बेला थियो । हामीलाई त्यहाँ सहरभन्दा प्रदूषण र हो–हल्ला अलि कमै भएको जस्तो अनुभूति भइरहेको थियो । सडकको अलिकति पछाडिपट्टि सानो चौर र किताबको दोकान थियो ।पूरा पढ्नुहोस्
राम लोहनी,मंसिर २३, २०७४
हरिमाया भेटवालको ‘कल्ली’ उपन्यास यही नामकी पात्रले जीवनको पच्चीस वर्षसम्म भोगेको घटनाको इतिवृत्त हो । उपन्यास मूलत: गाउँले परिवेशमा केन्द्रित छ । अधिकांश मानिस आर्थिक रूपले कमजोर छन् । दुईचार पैसो कमाउन विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ ।पूरा पढ्नुहोस्
उनी फेरि थिएटर आइपुगे
पर्वत पोर्तेल,मंसिर २३, २०७४
नेपाली सिनेमा जगत्का दिग्गज अभिनेता टीका पहारी करिब ३६ वर्षपछि रंगमञ्चमा फर्किए । लेखक श्याम साहको ‘अब्बा’ कृतिभित्रको ‘लाटीको छोरो’ कथालाई रंगकर्मी सुलक्षण भारतीले निर्देशन गरेको नाटकमार्फत उनी पुन: थिएटरमै फर्किए । पूरा पढ्नुहोस्
घनश्याम खड्का,मंसिर २३, २०७४
हेर्दै रमाइलो दृश्य थियो, मिहालको चुचुरोबाट रातो गोलो उदाउँदै गरेको । त्यस दिन पनि गतलाङमा त्यसै गरी घाम उदायो । हिमचुचुराहरू त्यसैगरी घामको लालीले राताम्य भए । हामी भने अलिक छिटो उठ्न नसकेकामा थोरै कैफियतका साथ स्याफ्रुबेंसीदेखि बतास्सिँदै आइरहेका थियौं । पूरा पढ्नुहोस्
मन लोभ्याउने ल्वाङ
भवसागर घिमिरे,मंसिर २३, २०७४
हामी जिन्दगीबाट भाग्नको लागि यात्रा गर्दैनौं, बरु जिन्दगीका लागि नै गर्छाैं ताकि यसले हामीलाई छाडेर नभागोस् ।’ यस्तै प्रचलित भनाइ अनि यात्रीहरूको यात्रा कथाले नै हामीमा नयाँ ठाउँ घुम्न जाने रहर जन्माउँछ । पूरा पढ्नुहोस्
कमलदेव भट्टराई,मंसिर २३, २०७४
बझाङको जयपृथ्वी–८ मा अवस्थित युवा वर्ष विद्यालयकी शिक्षिका टीका कुँवरलाई (३०) छाउपडी प्रथा गलत हो भन्ने राम्रोसँग थाहा छ । विद्यालयमा उनी छाउपडी प्रथा गलत हो भनेर पढाउने गर्छिन् । यो अन्धविश्वासलाई तोड्ने पाए हुन्थ्यो भन्ने हुटहुटी पनि उत्तिकै छ उनमा । पूरा पढ्नुहोस्
राखी गौचन,मंसिर २३, २०७४
आज म गर्भबाटै तिम्रो वेदना भोगिरहेकी छु हिजो भर्खर मात्र तिम्रो हातको स्पर्श अनुभव गरोप्रेम र पीडाको द्वन्द्वात्मक अनुभूतिप्रतिउत्तर दिन सकिनापूरा पढ्नुहोस्
रमेश श्रेष्ठ,मंसिर २३, २०७४
जब हुरी चल्छमनको आँगनमा ओर्लिएरप्रेमका किताबहरुआफैंविरूद्ध नारा लगाउन कम्मर कसेजस्तो गर्छन्,पूरा पढ्नुहोस्
मुराहरि पराजुली,मंसिर २३, २०७४
बितेको महिना साम्यवाद, समाजवाद, अधिनायकवाद, वाम गठबन्धनले धेरै चर्चा पाए । रूसी क्रान्ति यही अवधिमा सयौं वर्षमा पुग्यो । राजधानीबाट चुनावको अघिल्तिर फलाना उम्मेदवारलाई हराऊँ भन्ने आशयको कथित वाम बुद्धिजीवीहरूको वक्तव्य आयो । पूरा पढ्नुहोस्
आर्त,मंसिर २३, २०७४
पीडाको पहाडबाट ओर्लिएर देशले मलाई भन्यो निर्माणको यात्रामा निस्कन्छु म अबएक कदम...पूरा पढ्नुहोस्
राजेन्द्र पराजुली,मंसिर २३, २०७४
जोडजोडले साइकलको पाउदानी घुमाइरहेको किसनले गोडाको रफ्तार कम गर्‍यो । सडकको बीचमा फालिएको गाडीको बम्पट र त्यसमा लेखिएको उक्त हरफ बिस्तारै पढ्यो उसले । साइकल पछिल्तिर क्यारिजमा बसिरहेकी फातिमालाई पनि उसले इसारा गर्दै ओर्लन भन्यो । पूरा पढ्नुहोस्